दिपावली र प्रभु येशू - सत्य वेद पुुस्तकहरू
27/03/2016 06/07/2020 Ragnar
पहिलो पटक जब मैले ‘धेरै नजिकबाट’ दिपावलीको अनुभव यस बेला गरे जब म भारतमा काम गर्दे थिए। म यहाँ एक महीना बस्नको लागि आएको थिए र मेरो बसाई शुरुवातको दिनहरुमा में दिपावली दिपावलीको त्योहार मेरो वरिपरी मनाइदै थियो। जुन मलाई सब भन्दा धेरै स्मरण छ त्यो पटाका हो– हावा धुवाले भरिएको थियो र त्यसले मेरो आँखामा हल्का जलन हुँदै थियो। मेरो वरिपरी चारै तर्फ घटित भइ रहेको उत्साह को साथमा मैले दिपावलीको बारेमा जान्न चाहन्थे, कि यो के हो र यसको अर्थ के हो? र म यसको प्रेममा परे।
‘ज्योति वा प्रकाशको त्योहार’ ले मलाई प्रेरणाले भरिदियो किनकि म एउटा विश्‍वासी हूँ, र येशू सत्संग जसलाई प्रभु येशूको नाउले पनि चिनिनु हुन्छ, उहाँको अनुयायी हूँ। र उहाँको सन्देशको मुख्य शिक्षा यो हो कि उहाँको ज्योति अर्थात् प्रकाश हाम्रो बीचको अन्धकार माथि विजय प्राप्त गर्दछ। यसरी दिपावली को प्रभु येशूसँग मजबूतीको सम्बन्ध छ।
हामीहरु मध्य धेरै मानिसहरु जान्दछन कि हामीहरुको बिचमा अन्धकारलाई लिएर एउटा समस्या छ। त्यसै कारण लाखौं को संख्यामा कुम्भ मेला को त्योहार मा भाग लिन्छन – किनकि हामी मध्य लाखौँ यो जान्न चाहन्छौ कि हामीले पाप गरेका छौ र यसलाई हामीले धुने र स्वयं लाई शुद्ध गर्न आवश्यकता छ। यसको साथै, प्ररथा स्नाना (वा प्रतासना) मंत्रको प्राचीन ज्ञान प्रार्थना यस पापलाई वा हाम्रो भित्रको अन्धकारलाई स्वीकार गर्दछ।
म एक पापी हूँ। म पाप का परिणाम हूँ। म पाप मा उत्पन्न भए। मेरो प्राण पापको अधीनमा छ। म सबै भन्दा ठूलो पापी हूँ। हे प्रभु जससँग सुन्दर आँखा छ, मलाई बचाउनुहोस्, बलिदान दिने हे प्रभु।
तर अन्धकार, वा पापको हामी भित्रको यो सारा विचारले, हामीलाई उत्साहित गर्दैन। सत्य यो हो कि हामीले धेरै पटक यसलाई ‘खराब समाचारहरु’ को रूपमा सोच्द्छौ। यस कारण अन्धकारको माथि विजय प्राप्त गर्दै ज्योतिको विचारले हामीलाई धेरै अधिक आशा र हर्ष दिदछ। र त्यसैले, मोमबत्तिहरु, मिठाइहरु र पटाकाहरुको साथमा, दिपावलीले यस आशालाई व्यक्त गर्दछ कि प्रकाशले अन्धकारको माथि जय प्राप्त गर्दछ।
प्रभु येशू– संसार मा ज्योति
यस्तै नै वास्तवमा प्रभु येशूले गर्नु भएको छ। वेद पुस्तक (वा बाइबल) मा सुसमाचार येशूलाई यस प्रकारले वर्णन गर्दछ:
आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्‍वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्‍वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए, र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँविना बनिएन; उहाँमा जीवन थियो, र त्यो जीवन मानिसहरुको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ, र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन्। (यूहन्ना 1:1-5)
यस प्रकारले तपाईंले देख्नु सक्नु हुन्छ, यो ‘शब्द’ त्यस आशाको पूर्णता हो जसलाई दिपावलीले व्यक्त गर्दछ। र यो आशा परमेश्‍वरको तर्फ बाट यस ‘शब्द’ मा आउदछ छ, जसलाई यूहन्नाले पछि प्रभु येशूको रूपमा पहिचान गरे। सुसमाचारले निरन्तर यो भन्दछ कि
हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदैहुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरुकहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरुले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरु रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा, र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। (यूहन्ना 1:9-13)
यसले यो विवरण दिदछ कि कसरी प्रभु येशू ‘हर एकलाई ज्योति’ वा प्रकाश दिनलाई आउनु भएको थियो। केहि मानिसहरुले सोच्द्छन कि यो केवल केहि मानिसहरु माथि मात्र लागु हुदछ, तर ध्यान दिनुहोस् यसले भन्दछ कि यो प्रस्ताव यस ‘संसार’ मा रहनेहरु ‘हरेक’ को लागि हो कि उनीहरु ‘परमेश्‍वरको सन्तान’ बनोस्। यो यस्तो प्रस्ताव हो कि हरेक, कम से कम हरेक जसले दिपावली जस्तो त्योहारमा रूचि राख्दछन, को भित्रको अन्धकार माथि प्रकाशले विजय प्राप्त गर्दछन।
प्रभु येशूको जीवनलाई हजारों वर्ष पहिले नै भविष्यद्वाणी गरियोएको थियो
प्रभु येशूको बारेमा असाधारण यो हो कि उहाँको देहधारण वा मानव अवतार हुन् विभिन्न प्रकारहरु बाट र आरम्भिक मानवीय इतिहासको घटनाहरुमा धेरै प्रकारले पहिले बाट नै भविष्यद्वाणी गरिएको थियो र सूचित गरिएको थियो र हिब्रू वेदहरुमा यसको उल्लेख भएको छ। यसैकारण उहाँको बारेमा पहिले बाट नै लेखिएको थियो जबकि उहाँ पृथ्वीमा आउनु पनि भएको थिएन। र उहाँको देहधारणको धेरै भविष्यद्वाणिहरुलाई सबै भन्दा प्राचीन ऋग्वेदको भजनहरुमा स्मरण गरिएको छ, जुन आउनु हुने पुरूषको स्तुति गर्दछ, र मानवीय इतिहासको केहि आरम्भिक घटनाहरुमा उल्लेख गर्दछ, जसरी मनु की जल प्रलय, तेही व्यक्ति जसलाई
बाइबल – अर्थात् वेद पुस्तक –’नूह’ को नामले पुकार्दछन्। यो प्राचीन विवरण मानिसहरुको पापहरुको अन्धकारलाई दर्शाउदछ, जबकि पूरूषा, वा प्रभु येशूको आगमनको आशाको प्रस्ताव दिदछ।
ऋग्वेदको भविष्यद्वाणिहरुमा, पूरूषा, अर्थात् परमेश्‍वरको देहधारण र पूर्ण मनुष्यलाई बलिदान हुन को लागि आउदै हुनुहुन्थो। यो बलिदान हाम्रो पापहरुको कर्महरुका मूल्य तिर्न र साथै यो हाम्रो भित्रदेखि शुद्ध गर्नको लागि पर्याप्त थियो। शुद्धीकरण र पूजा-पाठ राम्रो हो, तर यसले हामीलाई केवल बाहिर मात्र सीमित राख्दछ। हामीलाई भित्रदेखि शुद्ध हुनको लागि असल बलिदानको आवश्यकता छ।
प्रभु येशूको हिब्रू वेदहरुमा भविष्यद्वाणी गरि दिएको थियो
ऋग्वेदको यी भजनहरुको साथमा नै, हिब्रू वेदहरुले यस आगमनको बारेमा भविष्यद्वाणी गरिएको थियो। हिब्रू वेदहरुमा महत्वपूर्ण ऋषि यशैया हो (जो 750 ईशा पूर्व थिए, अर्को शब्दहरुमा प्रभु येशूको यस पृथ्वीमा आउने 750 वर्ष पूर्व)। उहाँले उनको आगमनको प्रति धेरै अन्तर्दृष्टिहरुलाई दिएका थिए। उहाँले दिपावलीको पूर्वानुमान लगाई सकेका थिए जब उहाँले प्रभु येशूको बारेमा घोषणा गरे:
अन्धकारमा हिड्ने मानिसहरुले एउटा ठूलो ज्योति देखेका छन्; मृत्युको छायाको देशमा बसनेहरुमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ (यशैया 9:2)।
यस्तो घटना किन घटित हुने छ? उहाँले निरन्तर अघि बताउदछ:
किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिएको छ; शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्ति का राजकुमार कहलाइनुहुनेछ (यशैया 9:6)।
तर यद्यपि उहाँले देहधारण गर्नुभयो, उहाँ हाम्रो लागि एउटा दास बन्नुभयो, कि हाम्रो लागि अन्धकारमए आवश्यकतामा हामीलाई सहायता दिनुभयो।
निश्चयनै उसले हाम्रो निर्बलताहरु बोक्यो, र हाम्रो दुख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको, वहाँबाट पिटिएको र दुखा मा परेको सम्झयौं। तर ऊ ता हाम्रो अपराधहरुका निम्ति छेडियो। हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा झैं बरालिएका छौँ। हामी हरेक आफ्नै बाटो तिर लागेका छौं र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अर्धम हाली दिनुभएको छ (यशैया 53:4-6)।
ऋषि यशैया प्रभु येशूको क्रूसीकरणको विवरण दिद्छन। उसले यस्तो वर्णन गर्दछ जस्तो कि यो 750 वर्ष पहिले घटित भएको हो, र उसले साथमा क्रूसीकरणको विवरण यस प्रकारको बलिदानको रूपमा गर्दछ कि जसले हामीलाई चंगा गर्दछ। र यो कार्य जसको प्रस्ताव यो दासले यसरी दिन्छ जसरी परमेश्‍वरले त्यसलाई गर्न भन्नु भएको हो।
पृथ्वीहो पल्लो छेउसम्म तैले मेरो उद्धार पुर्याओस भनि अन्यजातिहरुकहाँ एउटा ज्योति पनि म तँलाई बनाउनेछु (यशैया 49:6-7)।
यसरी तपाईंले देख्न सक्नु हुन्छ! यो मेरो र तपाईंको लागि हो। यो हर एक जनाको लागि हो।
सत्य यो हो कि, एउटा व्यक्ति जसले निश्चित रुपमा यो सोचेको थिएन कि प्रभु येशूको बलिदान उनको लागि थियो उनी पावल थिए जसले येशूको नाउको विरोध गरे। तर उनको सामना प्रभु येशूको साथ भए जसको परिणामस्वरूप उनले पछि यस प्रकारले लेखे
जुन परमेश्वरले “अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस” भन्नुभयो उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनुभएको छ, ताकि परमेश्‍वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस (2 कोरन्थी 4:6)।
पावलको प्रभु येशूसँग व्यक्तिगत् सामना भयो जसको परिणामस्वरूप ज्योति उनको ‘हृदयमा चमकन’ लाग्यो।
येशूको ज्योतिलाई तपाईं स्वयंको लागि अनुभव गर्नु
त्यसैकारण अन्धकार र पाप बाट ज्योति बन्नलाई यो ‘उद्धार’ लाई पाउनको लागि के गर्नु पर्छ जसको बारेमा ऋषि यशैयाले भविष्यद्वाणी गरेका थिए, जो प्रभु येशूसँग छ, र जसको अनुभव पावलले गरे? पावलले यस प्रश्नको उत्तर आफ्नो एक अन्य पत्रमा दिएका छन् जहाँ उनले यस्तो लेख्दछन कि
किनकी पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्‍वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन छ (रोमी 6:23)।
ध्यान दिनुहोस् कि उनले कसरी भन्दछन कि यो एक ‘वरदान’ वा उपहार हो। एक उपहार, आफ्नो परिभाषा बाट कमाउन सकिदैन। कसैले तपाईंलाई सितैमा एउटा उपहार दिए जसलाई कमाएको होइन जसको लागि तपाईं राम्रो कर्महरु गर्नुभएको छैन। तर यो उपहारले तपाईंलाई तब सम्म केहि लाभ दिदैन् जब सम्म तपाईंको आफ्नो सम्पत्ति, तपाईंद्वारा ‘प्राप्त’ गर्नु हुदैन। त्यसैकारण यूहन्ना, जसको उद्धरण मैले शुरुमा गरेको थिए यस्तो लेख्दछन् कि
तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँ माथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरुलाई परमेश्‍वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो (यूहन्ना 1:12)।
त्यसैकारण तपाईंले केवल यसलाई स्वीकार गर्नु पर्छ। तपाईंले यसलाई उहाँसँग माँगेर प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ जुन तपाईंलाई निशुल्क दिनेछ। किनकी उहाँ जीवित हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईंले उहाँसँग माँग गर्न सक्नु हुन्छ। हो, उहाँ तपाईंको पापहरुको लागि बलिदान हुनुभयो, तर तीन दिन पछि उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो, ठीक त्यसरी नै जसरी ऋषि यशैयाले हज़ारों वर्ष पहिले भविष्यद्वाणी गरेका थिए जब उनले दु:ख उठाउनु हुने सेवकको बारेमा लेखेका थिए
उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुने छ; आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउने छ, र उसले तिनीहरुका अधर्म बोक्ने छ (यशैया 53:11)।
यस प्रकारले प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ र तपाईंको प्रार्थनालाई त्यही समयमा सुन्न सक्नु हुन्छ जब तपाईंले उहाँसँग गर्नु हुन्छ। तपाईं प्ररथा स्नाना (वा प्रतासना) मंत्रको प्रार्थनालाई उहाँसंग गर्नु सक्नु हुन्छ र उहाँले तपाईंलाई सुन्नु हुनेछ र तपाईंलाई बचाउनु हुने छ किनकी उहाँले आफ्नो बलिदान तपाईंको लागि दिनु भएको हो र अब उहाँसँग सबै प्रकारको अधिकार छ। यहाँ एक पटक फेरि त्यही प्रार्थना दिएको छ जुन प्रार्थना तपाईं उहाँसँग गर्नु सक्नु हुन्छ।
म एक पापी हूँ। म पाप का परिणाम हूँ। म पाप मा उत्पन्न भए। मेरो प्राण पाप को अधीनमा छ। म सबै भन्दा ठूलो पापी हूँ। हे प्रभु जससँग सुन्दर आँखा छ, मलाई बचाउनुहोस्, बलिदान दिने हे प्रभु।
तपाईंको अन्य लेखहरुलाई पनि यहाँ बाट पढ़नको लागि स्वागत छ। यो मानवीय इतिहास बाट शुरु हुँदछ र संस्कृति र हिब्रू वेदहरुमा दिएको अन्धकार बाट हामीलाई बचाउने र ज्योतिमा ल्याउने परमेश्‍वरको यस योजनालाई एक उपहारको रूपमा देखाउद छ। जब-जब म सँग समय हुँदछ म र अन्य लेखहरुलाई यसमा जोड्दै जानेछु। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्न छ भने मलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ।
यो दिपावलीमा, जब तपाईं मोमबत्तिहरु जलाउनु हुन्छ र उपहारहरुलाई एक अर्कामा दिनु हुन्छ, मेरो प्रार्थना छ कि तपाईं आन्तरिक ज्योति अर्थात् प्रकाशको उपहारको अनुभव प्रभु येशूको तर्फ बाट गर्नुहोस् जसरी पावलले अनुभव गरेका थिए र धेरै वर्ष पहिले परिवर्तित भएका थिए र जसलाई दिनको लागि तपाईंलाई पनि प्रस्ताव गरिएका थिए। दिपावली को शुभकामना!
दीवाली, महालक्ष्मी, येशू र दीवाली, रोशनी को तिहार